SPY043 - OMG Portable Water Bottle Real Camera miafina mpitsikilo miafina - Vahaolana OMG
SPY043 - Fakantsary miafina mpitsikilo miafina OMG azo entina anaty rano
Ity fakan-tsarimihetsika tavoahangy tavoahangy 2017P azo itondrana rano 1080 ity dia afaka manao horonam-peo sy horonan-tsary tena izy; Mora aminao ny mampifandray azy amin'ny solosainao mba hijerena izay noraketin'ny fakantsary
Miaraka amin'ny camera HD super hidden, Ny vahaolana dia: 1920 * 1080 amin'ny 30fps; Ity fakan-tsarimihetsika fakantsary miafina ity dia tia tavoahangy manga tsotra, ary azonao ampiasaina ho toy ny tavoahangy tena izy koa ianao afaka manoratra horonantsary, ity ideia ity dia mety amin'ny fotoana rehetra
Ity fakantsary miafina ity dia manana fomba fandraisam-peo roa. Mode detection motion: miditra amin'ny mode standby, ary tsindrio ny farany ambany, manomboka mirakitra an-tsoratra izy, ary avy eo manohy manindry ny farany indroa, hanomboka hamantatra ny fihetsehana izany. Mandrakitra ny fotoana rehetra: tsy mila manindry ny farany ambany ianao. Ny firaketana ny loop dia mampiditra ny rakitra tranainy indrindra raha toa ka feno ny fitadidiana. Tsy ho diso zavatra mihitsy ianao na dia feno aza ny fitadidiana
Ity dia tavoahangin-drano tena izy, Azo itokisana ianao hoentinao any amin'izay alehanao. Rehefa any amin'ny efitrano fianarana ianao dia azonao atao ny manoratra ny lesonao sy ny fotoana mahafaly amin'ny mpiara-mianatra aminao; Rehefa mandeha na aiza na aiza ianao na manatrika ny karazana fivoriana, Izany dia fitaovana mahazatra amin'ny ordinatera ho anao amin'ny fampiasanao any ivelany na ivelan'ny trano
Karatra 8GB azo ovaina (Kilasy 10) no nampidirina, Misy 400mAh batterie fanohanana izay manohy manoratra sahabo ho 180 Minitra ianao, ny firaketana Loop dia mampiditra ny rakitra tranainy indrindra, raha toa ka feno ny fahatsiarovana. Tsy ho diso zavatra mihitsy ianao na dia feno aza ny fitadidiana.
Fitaovana sticker: 157g rakitra vita pirinty (10 Pieces)
Lola modely: GC 1024
Battery fahafahana: 400mah Cobalt Pure
Tontolon'ny tavoahangy: Navoaka ny mari-pahaizan'ny PET Food
Fitaovana fanenomana: ABS Translucent
Video Fanapahan-kevitra: 1920 * 1080P AVI
Fanohanana karatra TF: Hatramin'ny 64GB
Fiainana miasa: Up to about 180 mins rehefa fenoina vidy.
Mametraha fotoana: Mamorona rakitra antsoina hoe "time.txt"
fa mamaly ny: 5V loader
Votoatim-bokan'ny varotra: 230*120*75mm/ 9*4.7*3 in
1080P Hidden Tablets Water Camera with Movement Detection
Ity karazana rano 2017 vaovao ity dia natao tamin'ny hatsarany tsara, Ny "Supreme Big Card Memory" dia Micro SD 64GB, ary misy 400mAh dia manohy ny fitadidianao momba ny ora 3, raha manomboka ny fametrahana ny moto voafaritra ianao, dia hanoratra rehefa Ao ny vatana Movable, Izany dia hamonjy fotoana misimisy kokoa ho anao.
(1) This Trinket Water Trigger Hidden Camera Will Monitor And Secure Indoor. Like: Home, Offices, Warehouses, Small Store, Bar, Showrooms, Desks, Stockrooms, Lobbies, Car and anywhere you want.
(2) Tandremo ny fihaonana mba hanoratana ny zava-nitranga rehetra momba ny asa tianao.
(3) mamantatra ireo hetsika heloka bevava, toy ny: Ny halatra, ny fanaratsiana, ary ny fandrobana.
(4) Atao ny fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny fianakavianao.
Fampiasana ivelan'ny trano
(1) Raha tsy misy Wifi dia azonao atao koa ny manoratra ny seho mariainganao na ireo hetsika mampihomehy any ivelany.
(2) Famerenana ny lesonao na ireo mpiara-mianatra aminao ivelan'ny trano.
Ahoana ny fampiasana izany
Voalohany, tsindrio ny Power Bottom 2 Sekonda eo amin'ny vatan'ny tavoahangy, ary hazavana ny jiron'ny hazavana mavo, dia miditra ao amin'ny mode standby
Faharoa, raha te-hanoratra amin'ny fotoana rehetra ianao, dia tsindrio fotsiny ny fotoana farany, ary ny jiro mavo dia mipoitra 3 miverina sy manomboka, Manomboka ny Recording, Rehefa te hijanona ny horonantsary ianao, ary hiditra ao amin'ny mode présent.
Fahatelo, raha te-hanokatra ny Detection Motion Activated ianao, Sokafy ny fakan-tsary Avelao hiditra ao amin'ny mode standby, ary avy eo ny Drindrin-drivotra indroa, ny hazavana ny jiro jiro dia mameno in-dimy, ary hanomboka ny firaketana, Rehefa misy Movable Body.
Ahoana ny fametrahana ny horonan-tsary
Ampiasao ny USB hampifandray ny fakantsary amin'ny solosainao, ary Mamorona "Time.txt" ary tazomy ao amin'ny SD Card, ampidiro ny fotoana ao amin'ny TXT, ohatra: 2017-05-18 23:59:59, dia sintomy avy eo avy amin'ny solosaina, Atsaharo ny fakan-tsary, avy eo azonao atao ny manoratra horonan-tsary amin'ny fotoana.
1. Satria efa ela ny fitaterana, aleo ianao mametaka bateria alohan'ny hampiasana.
2. Mila adiny roa eo ho eo ny famahana ny bateria, rehefa feno tanteraka dia hijanona ny Charge automatique.
3. Ity fakan-tsary anaty rano miafina mpitsikilo miafina ity dia tsy mila Connect WiFi, azo alaina ho anao na aiza na aiza, Ampifanaraho amin'ny olona toy ny firaketana ary toy ny mitazona fahatsiarovana sarobidy sy tanjona hafa amin'ny firaketana.
9.3 X 4.7 X 3 santimetatra
SPY043 - Lahatsary fakantsary fantson-drano tavoahangy azo avy amin'ny rano